देशको नयाँ आईजीपी को ? « Salleri Khabar
देशको नयाँ आईजीपी को ?
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति विवादमा मङ्गलवार निर्णय सुनाउने भएको छ । रिट निवेदक र सरकारी वकिलको बहस सकिए पनि समयाभावका कारण निर्णय सुनाउन अर्को दिनको पेसी तय भएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।
सरकारका तर्फबाट बहस गर्ने सहन्यायाधिवक्ता डा.रेवती त्रिपाठी र उपन्यायाधिवक्ता टिकेन्द्र दाहालले आईजीपी कसलाई बनाउने भन्ने विषय सरकारमा निहित रहेको बताउँदै प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा उल्लिखित ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमतालगायत प्रावधान ‘स्वविवेकीय’ रहेकाले निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । सरकारी वकिलले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विषय ४० नम्बर मात्र रहेकाले यो मात्रै प्रमुख आधार नहुने पनि बताए ।
रिट निवेदक नवराज सिलवाल र प्रहरी महानिरीक्षक सिफारिस भएका जयबहादुर चन्द एकैदिन डीआईजी भएकाले ज्येष्ठता मान्न नमिल्ने दाबी उनीहरूको थियो । ‘कानुन उल्लंघन भएकोमा बाहेक सरकारको काममा न्यायपालिकाबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,’ सहन्यायाधिवक्ता त्रिपाठीले बहसमा भने ।
यसैबिच कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अरूभन्दा आफू अब्बल रहेको भन्दै अर्का प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रकाश अर्यालले सोमबारै अर्को रिट दर्ता गरेका छन् । प्रहरी नियमावलीले आईजीपीका लागि तोकेको मापदण्डलाई सरकारले आत्मगत रूपमा हेर्न नपाउने दाबी उनको छ । कार्यसम्पादनमा आफू अगाडि रहे पनि सर्वोच्चले डीआईजी चन्द र सिलवालको मात्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन झिकाएको भन्दै समग्र तथ्यको मूल्याङ्कन गरी आईजीपीका लागि परमादेश दिन अर्यालको माग छ ।
दक्षिण कोरियामा कोरोनाका लागि रेमडेसिभर औषधिको प्रयोगमा अनुमति
करिब ८०० जना बिरामी व्यक्तिहरु अस्पतालहरुमा उपचार गराइरहेका छन् ।